Khamriga si ay u qaataan harikane jasiirad ah oo la socota Richard Branson - Waxaan nahay Spain
Posted on 9 January, 2019 16 February, 2019 By HB
Necker Island waa magaca jasiirad gaar ah oo ka mid ah bilyaneerka xoolo dhaqameedka Richard Branson, oo ku yaalla aagga Virgin Islands, halkaas oo Arbacadii hore Hurricane Irma ay soo afjartay wax kasta oo ku socda waddada. Irma waa in la ogaadaa in duufaan a on category 5 5, waa mid ka mid ah wakiilada ugu burbur ee dabiiciga ah, si hagaagsan u bixiyey "fartii Ilaah" ee filimka classic of 90, Twistter.
Waxyaabaha kale, Richard Branson wuxuu leeyahay maqaalo dhulka hoostiisa ah oo uu go'aansaday inuu magangalyo ilaa Irma uu soo maro kooxdiisa. isaga qudhiisuse wuxuu shaaca ka qaaday in dhismayaasha aad qabto ee aad jasiiradda ay diyaar u yihiin in ay hor istaagi xaalado adag, inkasta oo ay jirto in u adkeysan karaan duufaan a of category 5 yar, sidaa darteed ma ay ammaan oo dhan.
Laakiin runta ayaa ah in qabsashada ay soo gaartay, laakiin ma ahan inta kale ee jasiiradda, taas oo ahayd mid aad u xun. Markay duufaantii soo dhaaftay, Branson waxay ku dhawaaqday: "Waxaan ka soo qaxnay duufaankii ugu xooganaa ee ka mid ahaa qayb ka mid ah winery, iyo, nasiib wacan, way iska jirtey. Fikraddeena waxay la socotaa kuwa ay saameeyeen masiibadani dhammaan dhinacyada geeska ee Virgin Islands, Kariibiyaanka iyo meelo ka baxsan "
Ka hor inta uusan harikeyn, Branson wuxuu ku kaftamay in tan iyo isaga iyo kooxdiisa ay doonayaan in ay magan-galiyaan bakhaar, waxay u badantahay in ay jiri lahaayeen dhalooyin ka yar inta ay soo galayaan. Waa caadi, khamriga waxay noqon kartaa saaxiibka weyn ee waqtiyada xiisadda iyo magangelyada dad badan. Ma jiro hab wanaagsan oo loo isticmaalo wakhti ay istaraatijiyadu ugu fiican tahay in la joojiyo waxa ka socda meel ka baxsan dhalo khamri ah, oo garanaya cidda ay tahay maqaasiinkaXaqiiqdii ma ayan doonaynin in ay noqdaan khamri ruxan.
Necker & aagga oo dhan si buuxda u burburay. Fikradaha ay la socdaan qof kasta oo ay saameeyeen Duufaanku #Irma. Waad ku mahadsantahay taageerada https://t.co/0ji8qCZR6K pic.twitter.com/47BDKyrjvK
- Richard Branson (@richardbranson) 7 September ee 2017
Safar gaaban La Rioja, The Ribera del Duero, Bordeaux, galaysa Deux Meres ama Tuscany, madaxa diiradda on riyaaqayaa kasta oo ka mid ah aromas iyo guryaha qaar ka mid ah seddax ugu fiican adduunka ... baaraan, wax bartaan oo ay ogaadaan farsamooyinka by winemakers loo isticmaalo in ay wax soo saarka, cimilada ee degaanka sanadka xilliga beergooyska, wakhtigii khamriga ku qaatay nasashada ilaa aan ka furtay harikeyn, iyo dhamaan siraha dahabiga ah ee khamri hides.
Waxa kaliya ee soo maray habeenkii dabeylaha iyo roobka sida duufaan #Irma xuduudaha u dhowaa - qof kasta wuu xasillaa & xoojiyaa https://t.co/tF84SPx7aB pic.twitter.com/lbM0bdHxCv
- Richard Branson (@richardbranson) 6 September ee 2017
Iyo haddii haddii walxahaas la socda farsamooyinka farsamada o Iberian ham, waxaad u jeedin kartaa daqiiqad hurdo ah farxad saafi ah. Dhamaanteena way nala joogaan, waxaan isku daynaa inaan cabsiinno oo aynu ku harno habeenkii harikada, oo indhaheenna la xiray oo tukanayo, ama waxaan u jeedin karnaa xaaladdaha hareeraha iyo ka faa'iideysan karnaa. Waxaan hubnaa in Sir Richard Branson iyo kooxdiisa ay sameeyeen inta ugu badan ee ay joogaan at winery thanks to Irma.
Ka filan xooga buuxda ee qoryaha #Irma oo ku saabsan saacadaha 4, waxaan dib u soo celin doonaa maqaasiinka khamriga ee guriga ka hooseeya https://t.co/tF84SPx7aB pic.twitter.com/wMUDoX3O4v
Tagged: Bodega/harikeyn/Jasiiradaha Virgin Islands/Richard Branson/Khamriga
post Previous: Bodegas Navarro López
post Next: Bodega Pradorey, kuwa la doortay ee Ribera del Duero